Kooxda Arsenal oo gool madi ah kaga adkaatay Kooxda Watford oo ku ciyaareysay 10-xidig+Sawiro – Gool FM
“Chelsea ayaa ka fiican Barcelona iyo Real Madrid.” – Glenn Hoddle
Isku aadka afar dhammaadka UEFA Nations League oo caawa la sameynayo
Khabib oo shaaciyay halka sababta ee uu ugu soo laaban karo ciyaarta feerka ee UFC… (Miyuu markale wajahi doonaa McGregor?)
Muxuu Mourinho ka yiri kulanka ay Tottenham Hotspur la ciyaareyso Arsenal toddobaadka soo aaddan iyo rikoorka uu ka heysto Gunners?
Juventus oo weerar culus ku ah Kooxda Chelsea… (Immisa xiddig ayay ka dooneysaa?)
“Waxa aan runtii doonayo waa inaan markale la ciyaaro Messi.” _ Neymar Jr
Arsenal, Milan, Roma iyo Tottenham – Ka bogo guud ahaan kulamada caawa ee tartanka Europa League & saacadaha ay soo galayaan
PSG oo guul ka gaartay Man United & guud ahaan natiijooyinka kulammadii caawa laga ciyaaray Champions League… SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Man United iyo Paris Saint-Germain ee Champions League oo la shaaciyey
RASMI: Mid ka mid ah xiddigaha Kooxda Barcelona oo laga helay Korona Fayras
Kooxda Arsenal oo gool madi ah kaga adkaatay Kooxda Watford oo ku ciyaareysay 10-xidig+Sawiro
Bashiir April 15, 2019
( England) 15 Abriil 2019 kooxda Arsenal ayaa goil madi ah kaga adkaatay kooxda Watford kulan ka tirsan horyaalka Premier League oo maraya heerkii ugu dambeyey.
Kulan ciyaareedka qeebtiisa Koowaad ayaa waxa uu ku soo idlaaday 1-0 oo ay la hormartay Kooxda Arsenal, Wollow Kooxda Watford ay soo bandhigtay qaab ciyaareed aad loo jecleesto xili calaamada casaanka loo taagay kabtankooda.
Aubameyang ayaa dhaliyey goolka kaas oo ahaa qalad uu galay gool hayaha Kooxda Watford daqiiqadii 10-aad ee ciyaarta, natiijada kulanka ayaana noqotay 1-0.
Deeney oo ah kabtanka Kooxda Watford ayaa loo taagay calaamada casaanka kaddib qalad uu ku galay Torreira daqiiqadii 11-aad ee ciyaarta.
Watford ayaa soo bandhigtay ciyaar weerar ku dhisan balse uma suura galin in ay gool u badalaan sedex fursad oo halis aheyd oo soo martay, ugu dambeen kulan ciyaareedka qeebtiisa koowaad ayaa ku dhamaaday 1-0.
Nasiino Kaddib waxaa dib loo anba qaaday qeebtii dambe ee ciyaarta oo ka xiiso iyo xamaasad badneed qeebtii hore, kooxda Arsenal ayaa cadaadis badan ku saartay kooxda Watford oo ku ciyaareysay 10-xidig sidii ay kaga dhalin la haayeen gool kale oo labaad.
Watford ayaa marar badan gaartay shabaqa kooxda Arsenal si ay isaga soo aar gudaan goolka deenta ee lagu lee yahay, lkn fursadihii ay u buureen midna gool ma noqon.
Ugu dambeen Kulan ciyaareedka ayaa ku soo gaba gaboobay Arsenal oo ku awood sheegatay gool iyo waxba iyaga oona soo tiigsaday booska afaraad ee kala sareenta horyaalka.
HORDHAC: Barcelona vs Manchester United......(Red Devils maka jawaabi doontaa jugta lugtii hore)
Kooxda Real Madrid oo bareejo la dhaafi weyday Kooxda Leganes +Sawiro